देउवाको आक्रोस : समानुपातिक मात्रै भनेर हुन्छ ? काम गर्नु पर्दैन ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदा प्रतिपक्षको रुपमा प्रस्तुत नहुन पार्टीका सांसदहरुलाई सचेत गराएका छन् । कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाले
विराटनगर महानगरपालिकामा पोषण भत्ता सुरु, १०१ वर्षीय रेग्मीलाई भत्ता प्रदान
मोरङ । विराटनगर महानगरपालिका–३ का १०१ वर्षीय नारायणप्रसाद रेग्मीलाई १२ हजार रुपैयाँ प्रदान गरी आजदेखि पोषण भत्ता अभियान शुभारम्भ गरिएको छ । महानगरप्रमुख भीम पराजुली र वडाध्यक्ष विनोद बस्नेतले ज्येष्ठ
सरकारको नीति किसानमुखी नभएको सांसदहरुको टिप्पणी
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने आर्थिक एवं मौद्रिक नीति कृषकमुखी हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले कृषिका
कांग्रेस सांसदको माग- युक्तप्रसाद मृत्यु घटना छानबिन होस्
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरुले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वयान लिइरहेका युक्तप्रसाद श्रेष्ठको मृत्युको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन
कर्मचारीलाई हाजिर गराउन सामान्य प्रशासनको निर्देशन
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएर गएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नदिएपछि मन्त्रालयले
आज प्रचण्ड युएई जाने : पत्नी, छोरीहरु र नातिनातिना पनि साथैमा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मंगलबार युएई जाँदै छन् । प्रचण्डको यो भ्रमण पारिवारिक भ्रमण रहेको बताइएको छ । श्रीमती सीता दाहाल, छोरीहरु रेनु, गंगासहित
चिनी आयात रोक्न व्यवसायीको आग्रह
काठमाडौं । दशैंसम्म चिनी आयात रोक्न व्यवसायीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । चिनी उद्योगीहरुले नेपालमा उत्पादित चिनीको पर्याप्त भण्डारण रहेको भन्दै उनीहरुले चिनी आयातमा लगाइएको रोक तत्काल फुकुवा गर्न नहुने
विप्लवको ‘योजनावद्ध प्रतिरोध र नयाँ प्रतिरोध’ के हो ?
काठमाडौं । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले योजनावद्ध प्रतिरोधको नीति पास गरेको छ । झण्डै दुई हप्ताअघि सम्पन्न बैठकले योजनावद्ध प्रतिरोधको
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड विदेश भ्रमण जाँदै
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विदेश भ्रमणमा निस्किने भएका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेको अध्यक्ष ओली साउन १८ गते
आगामी जेठमा राप्रपाको अधिवेशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी जेठमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भएको छ । पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आगामी माघ महीनाबाट स्थानीय तहदेखिका परिषद्